5 Wadan Oo Ay Aad U Adagtahay In Dhalasho Laga Qaato - iftineducation.com
iftineducation.com – In aad hesho degenaansho ku meel gaadh ah amma muwaadinimo, gaar ahaan marka aad dal aad ajnabi ka tahay ku sugan tahay, waa fikrad dad badan u wanaagsan oo aad loo jecel yahay, balse waddamada qaar ayaa in la helo dukumantiga degenaashahooda ay aad u adag tahay ilaa inta aad ka guursanayso qof muwaadin ah oo dalkaas u dhashay amma aad ku leedahay awoowayaal asal ahaan halkaas degenaa.
Sidoo kale, waxa jira waddamo qofka ay dhalashada siinayaan ku xidha arrimo gaar ah sida inuu noqdo qof khibrad loo baahan yahay leh, maalgashade amma ganacsade ah, balse arrinkan looguma talagelin in dad badan lagu aqbalo codsigooda muwaadinimo, balse tiro yar oo loo baahan yahay uun baa lagu aqbala.
Dalalkan soo socda waa kuwo ay aad u adag tahay in dhalashadooda si fudud lagu helo, qofkana uu si fudud ku degenaan karo isagoo sharciyada degenaansho helaaya:
Waddamo badan oo Midawaga Yurub ah waxay leeyihiin sharciyo adag oo muhaajiriinta lagu dabbakho, balse Austria waxay ka mid tahay kuwa ugu sharciyada adag, gaar ahaan in qofku muwaadin ka noqdo aad bay u adag tahay.
Qof kasta oo muwaadin ahayn oo degen waddamada Midawga Yurub, joogana wax ka badan lix bilood waa in sharciga loo ogolaada sida xeerarkoodu dhigaayo.
Haddaba, dalka Austria qofku waa inuu jooga 24 bilood si uu u helo sharciyada joogitaanka kumeel gaadhka ah, muddadaaasna waxa lagu xidhaa inuu barto luuqadda Jarmalka iyo nolosha dhaqan ee Austria, halka dhalashada joogtada ah ay tahay in qofku uu dalka ku noolaado 15 ilaa 30 sannadood ka hor inta aan sharciyada muwaadinimada la siin.
Inaad hesho degenaanshaha rasmiga ah ee Jarmalka waa mid aad u adag illaa oo aad tahay muwaadin ka mid ah waddamada Yurub ee kale mooyaane.
Dadka ajenebiga ah ee dalalka kale ee aan Midawga Yurub ku jirin ka yimaada waxay ku qaataa in ay degenaanshaha aan rasmiga ahayn helaan 5 sanno, iyadoo lagu xidho awooddooda luuqadeed, siyaasadda uu aaminsan yahay iyo sida uu bulshada ula qabsaday, iyadoo qof waliba waajib lagaga dhigo inuu shaqaysan karo, dalkana dib wax u gelin karo si uu hadhaw u helo kaalmada marka hawl-gabka la noqdo la qaado.
In la noqdo muwaadin dhab ah qofku waa inuu 8 sanno dalka ku noolaada amma 7 haddii uu ku guuleysto tijaabooyinka la mariyo, kadib wuxuu qaadan kara dhalasho kasta oo waddamada Yurub ah.
Dalka Japan waqti aad u badan bay kugu qaadanaysaa in aad degenaansho joogto ah ka hesho amma fiisahaba, iskaba daa in aad muwaadin noqotee.
Dadka doonaya in ay degenaansho rasmi ah ka helaan Japan waa in ay 10 sanno oo xidhiidh ah oo aanay marna meel uga bixin ku noolaayeen dalka gudihiisa.
Qofka doonaya inuu muwaadin noqdana waa inuu shan sanno oo kale kusii noolaado, taasoo 15 sano noqoneysa, isagoo waliba Wasaaradda Caddaaladda ka helaayo ogolaansho, waxaana looga baahan yahay waraaq shaqo ah, iyadoo wax badan laga waydiin doono noloshiisa shakhsi ahaaneed.
Nidaamka Wasaaradda Caddaladda ee la maro dalka Japan waxay qaadata 12 bilood, halka dad kalena sheegaan in ay sannado qaadato, haddii loo ogolaado waa in qofku aanu dhalasho dal kale qaadan, kagana hor dhawaaqa bahda caddaalada in aanu dal kale dhalashadiisa diyaar u ahayn.
Qof kasta oo ajenebi ah, doonaayana inuu dego deegaannada quruxda badan ee Switzerland waa inuu saddex bilood codsiga raadsado si uu u helo degenaansho ku meelgaadh ah amma fiisaha, haddii aanad ahaynd qof ka soo jeeda dalalka Midawga Yurub waa inuu dalka ku noolaadaa 10 sanno.
Haddii qofku buuxiyo shuruudaha helitaanka dokumantiyada degenaanshaha dalka waxa barbar socota inta sanno ee uu qofku ku noolaa, haddii qofku muwaadinimo doonayana aad bay uga sii adag tahay oo waxa lagu xidhaa inuu asal ahaan ka soo jeedo bulshada Switzerland, balse waxa dalkan ogol yahay in qofku laba dhalasho qaadan karo.
Dalka Maraykanka waxa aasaaskiisa iska leh dad muhaajiriin ah, balse nidaamka lagu helo degenaanshaha rasmiga ah amma muwaadinimada aad baa loo adkeeyey laga bilaabo horraantii sannadkii 2000, kadib markii weeraro argagixiso lagu fuliyey.
Marka uu qofku soo galo dalka Maraykanka oo uu qoys uu ku leeyahay ku dego amma shaqo looga yeedho waxa aad u adag in qofku degenaanshaha rasmiga ah helo, balse waxa jira dad si gaar ah loola dhaqmo oo ay ka mid ihiin qaxxoontiga iyo magangelyo doonka amma qof bakhtiyaa nasiib ku helay.
Qofka hela degenaanshaha rasmiga ah, marka uu dalka shan sanno ku noolaado waxa uu raadinaya muwaadinimada dokumantiyadii caddaynaayey iyo inuu maro tijaabooyin badan, kuwaasoo ay ku jiraan aqoonta, dawladnimada fahankeeda iyo luuqada Ingiriisiga.
Ka hor inta aanu qofku noqon muwaadin waa in ay dadku ku dhaartaan dastuurka inuu daacad u noqonaayo. Dalka Maraykanku inta badan wuu ogol yahay qofku inuu laba dhalasho sito.